अभिनेत्री रेखा थापाको आज जन्मदिन कति बर्षा लागे उनी ? – Sanchar Patrika
August 21, 2020 223
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाको आज जन्मदिन परेको छ । उनी भाद्र ५ गते मोरङमा जन्मिएकी हुन् । मोरङमा जन्मिएकी रेखाले चलचित्र ‘हिरो’बाट नेपाली रजतपटको यात्रा तय गरेकी थिइन् ।यसपछि, उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । निरन्तर सफल चलचित्र दिदै दर्शकमाझ छाप छोड्न सफल नायिका थापाले आफ्नो उमेर भने खुलाउन चाहिनन् । भनिन्-‘अब म ठूली भएँ, उमेरको गिन्ती अब छोडेँ।’
नेपालमा नायिका निरुता सिंह, विपना थापा लगायतका नायिकाहरुले सारी, चोलोमा दबदबा कायम गरिरहेको समयमा रेखा चलचित्रमा आएकी थिइन् । यसपछि, उनको दबदबा चलचित्रमा सुरु भएको थियो जुन आज पनि कायमै छ । कुनै बेला रेखा छोटो पहिरन लगाएका कारण सर्वाधिक चर्चामा थिइन् । निर्माता छविराज ओझासँग करिब १० बर्ष बैबाहिक जीवन बिताएपछि रेखा अहिले एक्लै बस्न थालेकी छिन् । छवि र रेखाको अदालती प्रक्रिया अनुसार डिभोर्स पनि भैसकेको छ ।
रेखाले अभिनय गरेका ‘हिरो, अजम्बरी नाता, देवर बाबु, किस्मत, हिम्मत, हिफाजत, कसले चोर्‍यो मेरो मन, अन्दाज, काली, रामप्यारी, हिम्मतवाली’ लगायतका चलचित्र बक्स अफिसमा सर्वाधिक सफल पनि छन् ।
यदि, नेपालमा कुनै नायिकाको स्टार पावर छ भने त्यो रेखा थापाको मात्रै छ । रेखाको करिअर चलचित्रमा मात्र सिमित छैन । विशेषगरि, उनी राजनीतिमा पनि चर्चित छिन् । हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग केही बर्ष अगाडि सिंहदरबार अगाडि नाचेपछि रेखा राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चित भइन् । रेखा माओवादी पार्टीमा पनि प्रवेश गरिन् । एकिकृत नेकपा माओवादीले उनलाई दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा टिकट पनि दिएको थियो, तर भोटिङ लिस्टमा नाम नभएकाले रेखा उम्मेदवार बन्न पाइनन् । रेखा थापा ३८ बर्षमा लागेकी छिन।
PrevBreaking>>कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्यो अर्को एउटा यस्तो महत्वपूर्ण कदम
NextBreaking <<< किरण क्याम्पसमा रहेको आइसोलेसनमा चोरी
बिरामी भएका बेला पारस शाह अभिनेत्री सुस्मा कार्कीसँग यसरी जोडिए
खु:शीको खबर : नेपालमै पहिलोपटक कोरोना सं’क्रमितको उपचारमा भयो च’मत्कारिक सुधार !!!
यूरीन इंफेक्शनको समस्या छ ? फिटकरी पानीले सफा गर्नुहोस्, समस्या छुमन्तर